European Travel Commission: Afọ iri asaa nke ịkwalite Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » European Travel Commission: Afọ iri asaa nke ịkwalite Europe
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
N’emume nke afọ 70 ya, European Travel Commission (ETC) ebipụtala akwụkwọ, nke na-enye akụkọ zuru ezu gbasara akụkọ banyere ọrụ iri asaa mbụ nke ETC. Akwụkwọ ahụ, nke akpọrọ "The History of the European Travel Commission (1948-2018)", na-ewe ndị na-agụ ya na njem site n'akụkọ ihe mere eme nke imekọ ihe ọnụ na-akwalite Europe dị ka otu ebe na-aga mba ofesi na ime ka njem na n'ime Europe dịkwuo mfe ma na-adọrọ mmasị .
Onye isi oche ETC ahụ kwuru na Maazị Peter De Wilde kwuru na "ETC akọwapụtala afọ iri asaa nke akụkọ ihe mere eme nke njem na Europe na otu n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka njem nlegharị anya gọọmentị n'ụwa niile." “Ọ bụ njem na-enye obi ụtọ nke gosipụtara etu Europe anyị hụrụ n’anya siri chee ma merie nsogbu. Ọ bụrụhaala na anyị ga-enwe ike ịbịakọta ọnụ dị ka ndị Europe wee kọwaa ebumnuche anyị, ndị ndu anyị na mpaghara ndị njem ga-emepe ụzọ maka ụwa ka mma ebe ndị mmadụ ga-ele njem anya dị ka ahụmịhe nke ịkekọrịta ụkpụrụ na ịkwanyere njirimara ndị nwere ike ịgbanwe ndụ ”. , gbakwunyere Mazi De Wilde.
Akwụkwọ a nwere isi ọgụgụ isii nke usoro oge, akwụkwọ metụtara mmepe nke ngalaba njem njem nke Europe site na ntọala nke European Travel Commission na 1948 ruo ugbu a. Ọ na-akọwa afọ nke nwughari agha mgbe agha na Europe na ọrụ nke Marshall Plan na mmepe nke njem nleta na Europe. Akwụkwọ ahụ gara n'ihu igosipụta mkpọsa mgbasa ozi mbụ nke European na mba ofesi na otu mgbasa ozi ETC na America ghọrọ ọrụ kachasị maka nzukọ ahụ. Ọzọkwa, ọrụ ahụ lekwasịrị anya n'ihe ịma aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụụ nke njem nlegharị anya nke pụtara n'ike zuru oke na 1960s. The 1970s & 1980s wetara mmepe abụọ dị egwu na-ama jijiji maka ụlọ ọrụ njem, dị ka ụgbọ elu ọhụụ ọhụrụ na teknụzụ dabere na kọmputa, na nnukwu nsogbu (ọdịda akụ na ụba, mbibi nuklia na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu), nke chọrọ nzaghachi ETC. Afọ Agha Nzuzo mechara gbasaa otu ndị otu ETC na Central na Eastern Europe wee mụbaa mmekorita ya na ụlọ ọrụ Europe. Mwepụta nke visiteurope.com na 1996 kara akara mbido nkwalite dijitalụ maka Ebe Europe. Isi nke ikpeazụ na-eleba anya na ihe ETC rụzuru mgbe mgbanwe nke ndu ya na 2012 ruo ugbu a, na-agbasawanye ọrụ ya ma na-ekwupụta ọnọdụ ya dị ka olu nke njem ndị njem na Europe na narị afọ nke iri abụọ na otu.
"Akụkọ banyere European Travel Commission (1948-2018)" bụ ndị ọkachamara na-akọ akụkọ ihe mere eme atọ dere na mpaghara njem - Dr Igor Tchoukarine (Mahadum nke Minnesota), Dr Sune Bechmann Pedersen (Mahadum Lund), na Dr Frank Schipper ( Ntọala maka History of Technology, Eindhoven).